SOO SAARKA ISTICMAALKA QEYBTA DHAQANKA GURIGA - Shiinaha SOO SAARKA ISTICMAALKA QEYBTA DHAQAALAHA Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Guriga Isticmaal Qalabka IPL Quantum Ka Saarida Raadiyaha Qalabka Adkaynta Maqaarka N2
Guriga Isticmaal aaladda laser-ka ee IPL waa mid dhaqaale oo wax ku ool ah. Nabdoonaanta iyo Deg-degga .1-3 jeer fadhiyada ugu dhaqsaha badan 10 daqiiqo ayaa yarayn kara koritaanka timaha jirka oo dhan iyo wajiga Anti-gabowga
Imaatinka Imaatinka cusub ee IPL qalabka quruxda leysarka 3 IN 1 Silky Maqaarka Maqaarka Timaha Ka Saarida lmprove Qalabka finanka MT02
Epilator-ka IPL si wax ku ool ah ugama saari karo oo keliya timaha, wuxuu kaloo dhiirrigelin karaa dib-u-cusbooneysiinta unugyada, dib u soo celinta maqaarka oogada iyo dib-u-cusbooneysiinta maqaarka. Tiknoolajiyada IPL,
999999 Flashes Home Use IPL Ice Cool Timo Faylasha Timaha MT01
Epilator-ka IPL si wax ku ool ah ugama saari karo oo keliya timaha, wuxuu kaloo dhiirrigelin karaa dib-u-cusbooneysiinta unugyada, dib u soo celinta maqaarka oogada iyo dib-u-cusbooneysiinta maqaarka. Tiknoolajiyada IPL, nalka garaaca wadnaha wuxuu galaa xididdada timaha si looga hortago awoodda timo soo noqoshada,
Khaanadaha la beddeli karo ee IPL Taxanaha Guriga Isticmaal Qalabka Timo-qaadista ee La Qaadan Karo oo leh Hawl Fudud MN03
waxay ku guuleysan doontaa ujeeddada laga leeyahay in la baabi'iyo cirbadaha, daweynta telangiectasis, timaha oo laga saaro iyo maqaarka oo la cusbooneysiiyo. Sababtoo ah maqaarka caadiga ah wuxuu qaataa tamar yar, sidaa darteed daaweyntu waa amaan.
Hoyga Adeegsiga Mini Hifu RF Laabashada Ka-qaadista Wejiga Qaadista Maqaarka Mashiinka Quruxda HF101
Aragtida HIFU: Isticmaal ultrasound tamar sare leh oo diiradda saaraya booska daaweynta, si nudaha maqaarku u abuuro heerkul, una sameeyo unugyada khilaafaadka xawaaraha sare leh si loo kiciyo kolajka.
36pcs lamp 650nm diode laser Lipo Laser Pads Liposuction Qalabka Qurxinta Quruxda Qalabka Miisaanka DB02
Laser yareynta dufanka, isticmaal laser 650nm jilicsan si aad u baabi'iso unugyada dufanka qoto dheer, jabisay xuubka unugga, u beddel aaladda triglyceride, ka dibna ka tag jirka.
Qalabka Mashiinka Cusbooneysiinta EMS Maqaar-dib-u-cusbooneysiinta Qalabka Daaweynta Qalabka Laabashada Ka-saarista Cadeynta Qalabka Qurxinta ee Adeegsiga Guriga ML02
MIMI LED Photo Photo Therapy Qalabka wajiga wuxuu isku daraa RF / EMS / Kulayl / gariir / LED Light multifunction .Waxay wanaajineysaa maqaarka culeyska, kor u qaadista maqaarka maqaarka.
Kuleylka Ultrasonic Mini Hifu Maqaarka Cusbooneysiinta Wejiga Qaadista Laabashada Kaabashada Guriga Isticmaal Qalabka HF119
HF119 iyadoo la adeegsanayo ficil heer sare ah ee ultrasound ficil farsamo oo ku saabsan aagga daweynta, sidaas darteed nudaha maqaarku wuxuu abuuraa kuleyl wuxuuna ka sameeyaa unugyada khilaafaadka xawaaraha sare leh si loo kiciyo kolajka maqaarka.
Mashiinka Mashiinka Caatada ah ee Caatada ah Caloosha Baruurta Ka Saarida Qiyaasta Yar ee Baruurta Qaboojinta Cryo Pad Home Isticmaalka BD03
Mashiinkaan khafiifinta ayaa ka faa'iideysanaya dulqaad la'aanta qabow ee triglyceride, si uu ugu milmo unugyada baruurta tamarta qabow ee aan duullaan lahayn.
Daryeelka Maqaarka Ultasound Daryeelka wajiga RF qaadista wajiga ayaa horseed u ah adkeynta maqaarka photodynamic VL8
RF - Frequency Radio - Qalabka adkeeya maqaarka ayaa gaari kara maqaarkaaga hoostiisa wuxuuna si wax ku ool ah uga saari karaa laab-laabka nasolabial, laalaabka wejiga, qoorta laalaabkeeda iyo laalaabka indhaha. Tamarta RF waxay timaaddaa maqaarka maqaarka,